प्रभु इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क आर्जन ६९ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
प्रभु इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क आर्जन ६९ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:१०
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष को दोस्रोे त्रैमाससम्म ८३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको आज प्रकाशित वित्तिय विवरणमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । गत आवमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन रकम ६९ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको खुद खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमासको तुलनामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ संचित रहेको छ । त्यस्तै कम्पनीले महाविपत्ती जगेडा कोषमा ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले ४ हजार ३ सय २२ वटा बीमा दाबी वापतको १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले समिक्षा अवधिसम्ममा ८ सय ९ वटा बीमा दाबी वापतको १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकि रहेको छ ।
कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १८८ रुपैयाँ रहेको छ ।